Apple na-emepe emepe a ngwa oru nkwado | Esi m mac
Apple na-emepe ngwa nkwado
Jesus Arjona Montalvo | | Apple, Noticias, ọtụtụ
Otu n'ime ndị nwere na Apple nwere bụ ya ọrụ ahịa y nkwado teknụzụ, na dịka akụkọ ọhụrụ si Apple, ọ na-achọ ụzọ isi mee ya ọbụlagodi mfe na ngwa ngwa nye nkwado nka oru a. Dabere na akụkọ bipụtara na November 20, Apple na-akọ na ọ na-emepe ngwa maka iOS nke ga-enye ndị ahịa ya ohere nnweta dị mfe karịa n'elu. nyere ndị na-ahụ maka ọrụ aka gị aka ịrụ ọrụ ọsọsọ. The ngwọta nke nsogbu ga-mere na ọtụtụ aro maka ngwaọrụ gị na nhọrọ maka mmezi ya. Nhọrọ ndị a ga-ekpuchi Macs, iPhones, iPads, na ngwaọrụ ndị ọzọ Apple nwere.
E nyere Sonny Dickson onyogho sitere na ngwa na-akwadoghị ọrụ ma zipụ ya na mbụ USwitch Teknụzụ, ma gosiputa usoro nke nkowa banyere ngwa nke onwe ya, dika ọrụ ndị a ga-ejikọta na ngwa ahụ.
Kpọmkwem, ndị ọrụ nke ngwa ga-enwe ohere na Apple oru nkwado, gụnyere otu nhọrọ maka a mkparịta ụka kpọmkwem site na nkata. Ndị ọrụ ga-enwetakwa ozi dị mkpa - ziga ngwaọrụ gị na ọrụ ahụma ọ bụ ịtọọ oge nleta na Storelọ Ahịa Apple. Enwekwara nhọrọ iji gụọ akwụkwọ nkwado dị iche iche maka ngwaọrụ Apple.
Dị ka otu onye si kwuo, akụkọ mbụ na-egosi na dịka atụ anya na ngwa ọhụrụ ahụ ga-ejikọta ya na onye ahịa ya ID ID. Nke a pụtara na ndị niile na ngwaọrụ na ị denyere aha nwere ike inwe enyemaka nke a ngwa, na-eme nkwado ma ọ bụ oru aka ọbụna mfe niile gị edebanyere na ngwaahịa. A ka nwere ajụjụ a na-azabeghị, dịka amabeghị ma ọ bụ na ọ bụ a ngwa eji emebe ihe, ma ọ bụ nwere ike natively ike n'ime n'ọdịnihu iOS dị ka ngwa Apple ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple na-emepe ngwa nkwado
'Agha Thirdwa nke Atọ' na SKYHILL na Mac App Store
Apple Apple ọhụrụ: "My iPad Pro agaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ gbanye"